ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ အင်္ဂလန်အသင်း ကံကြမ္မာတစ်ပတ်လည်လာပြီလား
8 Jul 2018 . 7:32 PM
ကံကြမ္မာကို ယုံကြည်ပါသလား။ တချို့တချို့သောဖြစ်ရပ်တွေမှာ ကံကြမ္မာက အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကို ပရိသတ်တွေ မြင်တွေ့ခဲ့ဖူးမှာပေါ့။ “ကံကို ယုံပြီး ဆူးပုံမနင်းရ”ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားပုံရှိပေမယ့် လူတစ်ဦးရဲ့ ကောင်းခြင်း၊ ဆိုးခြင်းတွေက ကံအပေါ်မှာ အနည်းနဲ့အများမူတည်တာကိုတော့ ဘယ်သူမှ ငြင်းနိုင်မှာ မဟုတ်လောက်ဘူး။ အခုလို စကားပျိုးနေရတာက ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်အထိ တက်ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းအကြောင်းကို ပြောပြချင်လို့ပါပဲ။ ဘောလုံးလောကရဲ့ ဘိုးအေ လို့ တင်စားခံထားရတဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းဟာ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ကို တက်ခဲ့တာက အခုတစ်ခါအပါအ၀င်မှ (၃)ကြိမ် (၁၉၆၆၊ ၁၉၉၀၊ ၂၀၁၈)ပဲရှိပါသေးတယ်။ ၁၉၆၆ မှာ ဗိုလ်စွဲပြီးနောက်ပိုင်း ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုကို ပြန်လည်ကိုင်မြှောက်ဖို့ဆိုတာ ဝေးစွ၊ ဗိုလ်လုပွဲတောင် နောက်တစ်ကြိမ် မရောက်တော့ပါဘူး။
အခု အင်္ဂလန်အသင်း ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ ကံကြမ္မာတစ်ပတ် ပြန်လည်လာပြီလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၁၉၆၆ မှာ အင်္ဂလန်ဗိုလ်စွဲတုန်းက အဲဒီနှစ်မှာပဲ ရီးယဲလ်အသင်း ဥရောပဖလား (အခုချန်ပီယံလိဂ်)ရခဲ့တယ်၊ မန်စီးတီးအသင်း အမှတ်ပေးဖလားရခဲ့တယ်၊ ချယ်လ်ဆီးအသင်း အမှတ်ပေးဇယားမှာ အဆင့်(၅)ရခဲ့တယ်၊ ဘန်လေအသင်း ဥရောပ၀င်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ တိုက်ဆိုင်မှုလို့ပဲ ဆိုရမလား၊ ကံကြမ္မာဘီး တစ်ပတ်လှည်ပြီလို့ပဲဆိုရမလား၊ အခုနှစ်မှာ အရာအားလုံးက တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် လာဖြစ်နေတာကို ပရိသတ်တွေ သတိထားမိရဲလား။ ၁၉၆၆ တုန်းကလိုပဲ ဒီနှစ်မှာ ရီးယဲလ် ချန်ပီယံလိဂ်ရတယ်၊ မန်စီးတီး အမှတ်ပေးဖလားရတယ်၊ ချယ်လ်ဆီး အဆင့်(၅)ရတယ်၊ ဘန်လေ ဥရောပ၀င်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဒါဟာ ထူးခြားမှုတစ်ခုဖြစ်သလို အင်္ဂလန်အသင်း ကမ္ဘာ့ဖလားဆွတ်ခူးဖို့ နမိတ်ပုံရိပ်တစ်ခုများလား။ အင်္ဂလန်အသင်းဟာ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ ခရိုအေးရှားနဲ့ ဆုံတွေ့နေတယ်၊ အမှားအယွင်းမရှိခဲ့ရင် ဗိုလ်လုပွဲတက်ဖို့ များနေပြီး ဗိုလ်လုပွဲမှာ ပြင်သစ်(ဒါမှတ်မဟုတ်)ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ ဆုံတွေ့ရမယ်။ ကံတရားရဲ့ဖေးမမှုသာရှိခဲ့ရင် ဗိုလ်စွဲဖို့ မျှော်လင့်နိုင်တဲ့အနေအထားပဲ။ ကဲ ..ပရိသတ်ကြီးရေ (၅၂)နှစ်ကြာ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံအိပ်မက်ကို အင်္ဂလန်အသင်း ပြန်မက်ခွင့်ရမလားဆိုတာ ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်လား . . .
Photo:ESPN,World Cup 2018
ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဖွဈဖို့ အင်ျဂလနျအသငျး ကံကွမ်မာတဈပတျလညျလာပွီလား
ကံကွမ်မာကို ယုံကွညျပါသလား။ တခြို့တခြို့သောဖွဈရပျတှမှော ကံကွမ်မာက အဆုံးအဖွတျပေးသှားတဲ့အဖွဈအပကျြတှကေို ပရိသတျတှေ မွငျတှခေဲ့ဖူးမှာပေါ့။ “ကံကို ယုံပွီး ဆူးပုံမနငျးရ”ဆိုတဲ့ မွနျမာစကားပုံရှိပမေယျ့ လူတဈဦးရဲ့ ကောငျးခွငျး၊ ဆိုးခွငျးတှကေ ကံအပျေါမှာ အနညျးနဲ့အမြားမူတညျတာကိုတော့ ဘယျသူမှ ငွငျးနိုငျမှာ မဟုတျလောကျဘူး။ အခုလို စကားပြိုးနရေတာက ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ဆီမီးဖိုငျနယျအဆငျ့အထိ တကျရောကျသှားပွီဖွဈတဲ့ အင်ျဂလနျအသငျးအကွောငျးကို ပွောပွခငျြလို့ပါပဲ။ ဘောလုံးလောကရဲ့ ဘိုးအေ လို့ တငျစားခံထားရတဲ့ အင်ျဂလနျအသငျးဟာ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲသမိုငျးတဈလြှောကျ ဆီမီးဖိုငျနယျအဆငျ့ကို တကျခဲ့တာက အခုတဈခါအပါအဝငျမှ (၃)ကွိမျ (၁၉၆၆၊ ၁၉၉၀၊ ၂၀၁၈)ပဲရှိပါသေးတယျ။ ၁၉၆၆ မှာ ဗိုလျစှဲပွီးနောကျပိုငျး ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆုကို ပွနျလညျကိုငျမွှောကျဖို့ဆိုတာ ဝေးစှ၊ ဗိုလျလုပှဲတောငျ နောကျတဈကွိမျ မရောကျတော့ပါဘူး။
အခု အင်ျဂလနျအသငျး ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဖွဈဖို့ ကံကွမ်မာတဈပတျ ပွနျလညျလာပွီလားဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ၁၉၆၆ မှာ အင်ျဂလနျဗိုလျစှဲတုနျးက အဲဒီနှဈမှာပဲ ရီးယဲလျအသငျး ဥရောပဖလား (အခုခနျြပီယံလိဂျ)ရခဲ့တယျ၊ မနျစီးတီးအသငျး အမှတျပေးဖလားရခဲ့တယျ၊ ခယျြလျဆီးအသငျး အမှတျပေးဇယားမှာ အဆငျ့(၅)ရခဲ့တယျ၊ ဘနျလအေသငျး ဥရောပဝငျခှငျ့ရခဲ့တယျ။ တိုကျဆိုငျမှုလို့ပဲ ဆိုရမလား၊ ကံကွမ်မာဘီး တဈပတျလှညျပွီလို့ပဲဆိုရမလား၊ အခုနှဈမှာ အရာအားလုံးက တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျ လာဖွဈနတောကို ပရိသတျတှေ သတိထားမိရဲလား။ ၁၉၆၆ တုနျးကလိုပဲ ဒီနှဈမှာ ရီးယဲလျ ခနျြပီယံလိဂျရတယျ၊ မနျစီးတီး အမှတျပေးဖလားရတယျ၊ ခယျြလျဆီး အဆငျ့(၅)ရတယျ၊ ဘနျလေ ဥရောပဝငျခှငျ့ရခဲ့တယျ။ ဒါဟာ ထူးခွားမှုတဈခုဖွဈသလို အင်ျဂလနျအသငျး ကမ်ဘာ့ဖလားဆှတျခူးဖို့ နမိတျပုံရိပျတဈခုမြားလား။ အင်ျဂလနျအသငျးဟာ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ ဆီမီးဖိုငျနယျမှာ ခရိုအေးရှားနဲ့ ဆုံတှနေ့တေယျ၊ အမှားအယှငျးမရှိခဲ့ရငျ ဗိုလျလုပှဲတကျဖို့ မြားနပွေီး ဗိုလျလုပှဲမှာ ပွငျသဈ(ဒါမှတျမဟုတျ)ဘယျလျဂြီယံနဲ့ ဆုံတှရေ့မယျ။ ကံတရားရဲ့ဖေးမမှုသာရှိခဲ့ရငျ ဗိုလျစှဲဖို့ မြှျောလငျ့နိုငျတဲ့အနအေထားပဲ။ ကဲ ..ပရိသတျကွီးရေ (၅၂)နှဈကွာ ပြောကျဆုံးနတေဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံအိပျမကျကို အင်ျဂလနျအသငျး ပွနျမကျခှငျ့ရမလားဆိုတာ ရငျခုနျစှာနဲ့ စောငျ့ကွညျ့လိုကျရအောငျလား . . .